Dropshipping FAQ - N'ogbe diffusers maka Mmanụ Dị Mkpa | AromaEasy
Kedu ka mbupu ụgbọ mmiri si arụ ọrụ?
Mbupu ụgbọ mmiri:
-> Asịwo-> Ebe ịtụ na weebụsaịtị gị—> Na-akwụ gị ụgwọ
-> / / ellerre ere-> Were gị uru n'akụkụ & Forward iji
-> Zitere anyị iwu ahụ site na API ma ọ bụ faịlụ .CSV—> Mee usoro ịkwụ ụgwọ-> Ọrụ gị kwụsịrị ebe a.
Etu esi ejikọ iwu ahịa na AromaEasy ERP?
Biko kekọrịta obere akaụntụ maka Aromaeasy ebe a
-> Hazie usoro-> ụgbọ mmiri na ahịa gị.
Ekwesịrị m ịkwụ ndị na-ebubata ya otu ego mbanye?
Ee, anyị ga-ana $19.99 USD / kwa ọnwa maka mbupu akaụntụ mbupu ụgwọ otu oge.
Enwere m ike nweta onyonyo dị elu site na Aromaeasy maka mbupu mmiri?
Anyị nwere ike ịnye ọmarịcha foto pụrụ iche n'efu
Ọ kwesịrị na m ga-azụta ihe karịrị otu ngwaahịa?
Na ịda mba, ị naghị azụ ngwaahịa ahụ. Yabụ ọnweghị ọnụọgụ nke ngwaahịa ị depụtara maka ire ere.
Ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ maka ngwaahịa ahụ tupu m ree ya?
Anyị ga-eziga ngwaahịa ahụ n'aha gị maka onye ahịa ikpeazụ. Ga-akwụ ụgwọ maka ngwaahịa otu oge a ahịa nyere gị.
Kedu ụgwọ ego ụgbọ mmiri dobe?
A na-akpọkwa ego ụgbọ mmiri dobe ụgwọ "njikwa". Nke a bụ ego ịkwụ ụgwọ iji kewaa okwu dị iche iche wee buru otu ngwaahịa iji zigara onye ahịa gị.
Ego ole bụ ego ụgbọ mmiri dobe?
Ọ bụrụ na enwere ego ụgbọ mmiri dobe, ha na-esite na $ 1.00 ruo $ 5.00. Oge ụfọdụ ị ga - ahụ ụgwọ ụgbọ mmiri dị elu, nke nwere ike nghọta ozugbo ị hụrụ ụdị ngwaahịa a ga - eziga gị. Ngwaahịa dị nro na-ewekwu ihe iji kwakọba na ụgbọ mmiri ha, yabụ a ga-akwụ ụgwọ ụgwọ mgbakwunye n'ụgbọ mmiri dobe.
Ego mbupu ụgbọ mmiri anaghị agụnye ụgwọ mbufe nke ngwaahịa a na onye zụrụ ya. Ọnụ ahịa mbupu ndị ahịa na-adabere na mba dị iche iche na oke ngwaahịa, pịa ebe a ịlele nkọwa mbupu ụgbọ mmiri.
Kedu otu m ga-esi nweta onyonyo na nkọwapụta nke ngwaahịa ndị ahụ mmiri kwụrụ maka weebụsaịtị m?
Anyị ga-enye gị ihe onyonyo niile na nkọwapụta ngwaahịa ị ga - ere ngwaahịa ozugbo ịbidola akaụntụ anyị.
You na-enye atụmatụ mbikọ ma ọ bụ ngwanrọ, API. CSV faịlụ ma ọ bụ faili ntanetịime iji depụta ngwaahịa ma ọ bụ mee usoro ịhazi akpaaka?
Ee ， Anyị na-enye faili ntanetịime anyị ERP na Shopify. anyị nwere ike ime ka ịtụ usoro. CSV faịlụ.
Kedu ka m si mara na ngwaahịa a ka ga-adị na ngwaahịa site na mgbe m rere ya?
Anyị nwere ike ịkekọrịta ezigbo oge ngwongwo gị.
Achọrọ m Tax ID iji rụọ ọrụ na Aromaeasy.com
Ee! Iji na-arụ ọrụ na ezigbo ndị na-ere ngwaahịa n'ahịa, ị chọrọ NJ ụtụ isi. A na-akpọ NJ ụtụ isi ahịa NJ ahịa & Jiri ọtụtụ steeti. A pụkwara ịkpọ ya Asambodo Ndị Ahịa ma ọ bụ Asambodo Reseller. Lelee ya na Ngalaba Na-enweta Ego nke Steeti gị!
Achọrọ m Tax ID ka m rụọ ọrụ na ndị na-ebubata ya ma m nọrọ na mpụga US?
Onye ọ bụla si ebe ọ bụla nwere ike ịzụta ohere ịbanye na ndị otu anyị ma ka nwee ọtụtụ elele! Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'otu mba, ị na-anabata gị ịkpọtụrụ nkwado anyị ma anyị ga-enyocha gị. Buru n'uche, na ebe ọ bụ na iwu mba ụwa dị iche na US, ọ nweghị ID ụtụ isi dị ka ịchọrọ maka USA. Yabụ na ị gaghị achọ NJ ụtụ isi iji soro ndị na-ere ngwaahịa US. Agbanyeghị, ị ka ga-enweta aha azụmaahịa edenyere aha na akwụkwọ ọ bụla ọzọ achọrọ iji gosipụta na ị bụ onye na-ere ahịa ziri ezi. Yabụ, ị ga-enyocha obodo ma ọ bụ mpaghara gị iji hụ ihe ịkwesịrị igosi na ị bụ ezigbo ụlọ ahịa.
Achọrọ m Tax ID ka mụ na anyị rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na m na-eme atụmatụ ire na eBay ma ọ bụ Amazon?
Ee! Iji na-arụ ọrụ na ezigbo ezigbo onye na-ere ngwaahịa, ị chọrọ NJ ụtụ isi. Biko lee weebụsaịtị nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ego nke Steeti gị maka ozi gbasara ahịa & iji ụtụ isi.
Enwere m ike iji webụsaịtị m dị ka aha azụmaahịa m debara aha m?
Ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị bụ aha ụlọ ahịa gị. Aha azụmahịa nwere ike ịdị iche na aha ụlọ ahịa gị. Mana ihe dị mkpa bụ ịdebanye aha na steeti gị.
Kedu ka m ga-esi nweta NJ ụtụ isi?
Inweta NJ ụtụ isi dị mfe maka ọtụtụ steeti! Ọtụtụ steeti nwere mpempe akwụkwọ ndebanye na ntanetị. Naanị chọta Ngalaba Na-ahụ Maka Ego nke Steeti gị na igwe nchọgharị, saịtị ahụ ga - enwe .gov na njedebe URL. Chọọ maka: State Name Department of Revenue ma ọ bụ Search: Inweta Tax ID na Aha Steeti.
You ga-eji ozi ụlọ ọrụ m na mbufe nye ndị ahịa m?
Ee, anyị ga-eziga ngwaahịa na aha gị
Ọ bụrụ na m nye gị ozi nke onye ahịa m, ị nweghị ike izuru m onye ahịa m wee bipụ m ire maka ịzụta ọ bụla n'ọdịnihu?
Azụmaahịa anyị na-ere ndị na-ere ahịa, ọ bụghị ndị ahịa ikpeazụ. anyị nwere nkwekọrịta ị nwere ike ịbinye aka nke ga-ekwupụta na ha agaghị ere ndị ahịa gị ahịa.
Kedu ka esi edozi nloghachi? Ndị ahịa m ọ na -ebuga m ngwaahịa ma ọ bụ Aromaeasy?
Ihe kpatara ịlaghachi:
Ngwaahịa mebiri emebi yana /ma ọ bụ nwere nkwarụ /gbuo oge na nnyefe. Nlaghachi azụ na Aromaeasy ma ọ bụ nkwụghachi zuru ezu.
Onye zụrụ ahịa nyere iwu nha na -ezighi ezi / anaghị amasị / enweghịzi mkpa. Ndị ahịa gị kwesịrị iweghachitere gị ngwaahịa ndị ahụ.
Gịnị bụ ikpu ìsì?
Kpuru ìsì dropshipping is mgbe anyị ga-eji a nloghachi labeelu na-agụ ihe dị ka "Mmezu Center" ma ọ bụ "Shipper" dị ka azụmahịa aha.
Kedu uru dị na iji Dropshipper maka azụmaahịa m?
Enweghị elufe bụ uru mbụ. Naghị echekwa na ịkwakọba ngwa ahịa ahụ, yabụ enweghị ụgwọ mgbakwunye ebe ahụ. Enweghị ego ọzọ ị ga-akwụ iji wepụta oge iji kwụọ ma bute ngwaahịa a. Ntufu di kwa nnwale maka ileputa ngwa ahia.
You jidere na ị na-adịkarị ngwaahịa na ngwaahịa ụgbọ mmiri n'oge kwesịrị ekwesị?
Agaghị atụkwasị obi na ndepụta ndị na-ekpo ọkụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ndepụta dị ọkụ, mgbe ahụ ọtụtụ puku ma ọ bụrụ na ọ bụghị nde ndị ọzọ na-ere ahịa na-elekwa ndepụta ahụ ọkụ. Nke ahụ na-eme ka asọmpi dị na ngwaahịa ndị ahụ pụta, ọ dịkwa mfe ịchụpụ gị n'ahịa ngwaahịa ahụ.
Kedu ụzọ ịkwụ ụgwọ ị nabata?
Kedu ego m ga-akwụ na ya?
You na-enye mbupu ọsọ ọsọ?
Kedụ ka m ga-esi nweta ngwugwu m?
A na-enye koodu ntinye na iwu gị, ịnwere ike ịdebe na weebụsaịtị ụgbọelu.
Enwere akwụkwọ ikike?
Akwụkwọ ikike otu afọ.
Nwere ike iji ngwa ahịa gị mepụta ngwaahịa gị?
Ee, i nwere ike.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe maka mbupu?
Nwere ike inwe nghọta dị nkenke banyere oge nnyefe dị na tebụl na-esonụ.
Hipgbọ mmiri Site
Mbupu Akụ na US
USPS Akwụkwọ Ozi Mbụ
Ibu ụzọ nke USPS
Ihe ngosi USPS Express
Fedex 2 .bọchị
Fedex Standard N'abalị
Ụlọ ọrụ USPS Express International
USPS Ibu ụzọ International
Mbupu Akụ na ụba ụwa
Brazil 、 Russia
DHL Ozi zuru ụwa ọnụ
Mbupu akụ na ụba UK
Mba ndị ọzọ EU
Banyere ọnụahịa mbupu:
Ọnụahịa Diffusers: dabere na ọnụahịa ekekọtara (24pcs-95pcs)
Ọnụahịa mmanụ dị mkpa: dabere na ọnụahịa ekekọtara (10pcs-99pcs)